War-Saxaafadeed: Shirkadaha TransferGalaxy Iyo Telesom oo Daah-furay Iskaashi Adeegga Xawilaada Dibadda Ah | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM War-Saxaafadeed: Shirkadaha TransferGalaxy Iyo Telesom oo Daah-furay Iskaashi Adeegga Xawilaada Dibadda Ah
September 21, 2015 - Written by Mustafe Faro
Hargaisa – (Hubaal) – Shirkadda TransferGalaxy Ee Adeegga Xawaaladda Casriga ah iyo Telesom Company waxay maanta si rasmi ah u daahfurayaan iskaashi adeeg (Service Partnership) dhinaca xawaaladda dibadda ah oo ay wada yeesheen. Adeeggan ay wada daahfurayaan labada shirkadood waxa uu suurtagalinayaa in si Online ah ay macaamiishu qurba joogga ahi 22 wadan oo Yurub ah uga soo xawili karaan lacagaha iyadoo ay eheladooda dalka joogaana xisaabahooda ZAAD Service ay si toos ah ugu heli doonaan. Iskaashiga Adeegga Xawilaadda Dibadda ee Mobile-ka ee TransferGalaxy iyo Telesom Company waxa uu faa’iido wayn u leeyahay bulshada Somaliland ee sida tooska ah ugu tiirsan lacagaha ay eheladooda dibadda jooga ka helaan maadaama oo loo suurtagaliyay qurba jooga lacagta soo dira inay hanaan FUDUD oo AAMIN ah ay waqti kasta iyo goob kasta uga soo xawili karaan lacagaha ay dalka u soo dirayaan.
Xawilaadda lacagta dalka uga timaadda qurbuhu waa mid kaalin wayn kaga jirta nolosha dadka islamarkaana qayb ka ah dib u dhiska iyo horumarinta dalka, sidaasi awgeed, Iskaashigan adeegga Xawilaadda Dibadda ee TransferGalaxy iyo Telesom Company waa mid fursad wayn ah isla markaana suurtaglin doona hanaan HUFAN oo xawilaadda dibaddu ugu timaado bulshada Somaliland.
“Sida ay cadeeyeen Baanka Aduunku, sanadkii 2014 waxa qurba jooga 14-ka dal ee aanu rabno inaan ka hawl-galnaa ay dalalkooda u direen xawilaado ka badan 75 Bilyan oo Doolar, iyadoo aan taas ka shidaal qaadanayno, Shirkadda TransferGalaxy waxay u heelan tahay inay isku xidho qurba joogga xawaaladda dibadda ka soo dira iyo eheladooda Adeegga lacagta ee Mobile-ka dalka ku isticmaala maadaama baahi wayn loo qabo HANAAN CASRI AH, FUDUD, JABAN oo LA ISKU HALAYN KARO. Maanta farxad wayn ayay noo tahay maadaama aanu Iskaashi la furanay Shirkadda Telesom si aanu qurba jooga ugu suurta galino inay adeegga ZAAD lacagaha ugu soo diri karaan si toos ah eheladooda” sidaas waxa yidhi: Yosef Mohamed, Gudoomiyaha TransferGalaxy.
“Waanu ku faraxsan nahay iskaashigan maadaama uu sii balaadhinayo adeeggii aanu macaamiishayada u haynay, waa qiime u soo kordhay adeeggii xawilaadda dibadda ee aanu u fidin jirnay bulshada reer Somaliland iyadoomarkasta himiladayadu tahay inaanu u fududayn baahiyaha adeeg lacageed ee macaamiishayada gudo iyo dibadba. waxaanu rumaysan nahay inay tani tahay fursad cusub oo sii horumarin doonta nolosha iyo dhaqaalaha bulshada Somaliland”. Sidaasna waxa Kulankii Daahfurka ee Iskaashiga adeeg ka yidhi: Abdirahman Shire, Madaxa Adeegga ZAAD ee Shirkadda Telesom.
Telesom waa shirkadda ugu wayn shirkadaha isgaadhsiinta ee Jamhuuriyadda Soomaliland, waxa xarunteeda guud ku taallaa Hargaisa, caasimadda J.S.L. Shirkadda Telesom waxa la aasaasay sanadkii 2001, waxaanay ka hawl-gashaa dhamaan gobolada Dalka iyo degmooyin-kiisa.
Telesom waxay leedahay shabakadda isgaadhsiineed ee ugu balaadhan dalka waxaanay bulshada Somaliland u fidisaa adeegyo tignoolajiyadeed oo casri ah oo la xidhiidha dhinacyada GSM-ka, Internet-ka, Landline-ka, 3G iyo Adeegga Lacagaha ee Mobile-ka ee ZAAD Services. Telesom waa shirkaddii ugu horaysay ee adeegga MMT-ga ka hirgalisa Somaliland, waxaanay ku jirtaa shirkadaha hormuudka u ah adeegga MMT-ga ee dunida oo dhan iyadoo heer caalami ah loogu aqoonsaday inay kamid tahay shirkadaha ugu guusha balaadhan dunida.
TransferGalaxy waa shirkad la aasaasay July 2014 oo laga leeyahay dalka Sweden oo ku shaqaysa hanaanka casriga ah ee xawilaadda dibadda isla markaana suurta galisa in iyadoo macaamiishu adeegsanayaan Computer-kooda inay lacago ugu soo xawili karaan eheladooda dalka joogta adeeggooda ZAAD Service.
TransferGalaxy waxaad lacag kaga soo diri kartaa 22 wadan oo Yuru ah adoo u diri kara 14 wadan oo dunida oo dhan ah oo ay ugu horayso Somaliland. Waxaad Hubaal media kala soo xidhiidhi kartaan E-mailaddan Hubaal100@hotmail.com Hubaal100@gmail.com